शम्भुजित स्वर्णिम सांगीतिक यात्रा ऐतिहासिक हुनेछ - कुराकानी - साप्ताहिक
गायक तथा संगीतकार शम्भुजित बाँसकोटा नेपालमा पहिलो पटक एकल सांगीतिक कार्यक्रममा प्रस्तुत हुँदैछन् । विदेशी भूमिमा दर्जनौं पटक एकल गायन कार्यक्रम दिइसकेका बाँसकोटालाई नेपालमा पहिलो पटक एकल गायन कार्यक्रममा प्रस्तुत गराउने जिम्मा साधना कला केन्द्रले लिएको छ । भोलि शनिबार २ बजेपछि टुँडिखेलमा प्रारम्भ हुने शम्भुजित स्वर्णिम सांगीतिक यात्रामा बाँसकोटाका लोकप्रिय गीत–संगीत बाँसकोटासहित विभिन्न गायक–गायिकाहरूले प्रस्तुत गर्दैछन् । कार्यक्रमको पूर्वसन्ध्यामा साप्ताहिकका कृष्ण भट्टराईले संगीतकार बाँसकोटासँग गरेको कुराकानी :
शम्भुजित स्वर्णीय सांगीतिक यात्राको अवधारण कसरी बन्यो ?
मैले आफ्नो सांगीतिक जीवनका क्रममा धेरै गायक–गायिका तथा गीतकारहरूका लागि ब्रेक थू्र हुने संगीत सिर्जना गरेको छु । त्यस्ता सिर्जना धेरै भए पनि त्यसलाई नेपाली दर्शक तथा स्रोतासमक्ष प्रत्यक्ष प्रस्तुत गर्ने समय पाइरहेको थिइनँ । अहिले आएर मलाई यो कार्यक्रम गर्नै पर्छ जस्तो लाग्यो ।
यसअघि पनि यस्तो कार्यक्रमको योजना बनाउनुभएको थियो कि ?
मलाई २०–२५ वर्ष अघिदेखि नै नेपालमा यसप्रकारको एकल गायन कार्यक्रम आयोजना गर्न वा त्यसमा सहभागी हुन आग्रह नगरिएको होइन । यद्यपि म संगीत सिर्जनासहित अन्य विभिन्न सांगीतक गतिविधिमै व्यस्त रहेँ । आज आएर यस्तो बृहत् सांगीतिक कार्यक्रमको साइत जुरेको छ । मलाई लाग्छ यो कार्यक्रम ऐतिहासिक हुनेछ ।
कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण के–के छन् ?
दसैं, तिहार तथा छठजस्ता हाम्रा महान् पर्वहरूको पूर्वसन्ध्या पारेर आयोजना हुन लागेको यो कार्यक्रममा मैले तयार पारेका अत्यन्त लोकप्रिय गीतहरू सम्बन्धित गायक–गायिकाहरूकै स्वरमा प्रत्यक्ष प्रस्तुत हुनेछन् । त्यसबाहेक टुँडिखेलमा प्रवेश नि:शुल्क हुने यो कार्यक्रममा हजारौं दर्शक तथा श्रोताको सहभागिता रहने कुरामा हामी ढुक्क छौं ।
कार्यक्रममा कस्ता गीतलाई समावेश गर्दै हुनुहुन्छ ?
झण्डै चार घण्टा चल्ने यो कार्यक्रममा स्वर सम्राट स्व.नारायण गोपालदेखि नवीन के भट्टराईसम्म, उदित नारायण झादेखि विश्व नेपालीसम्म, देविका बन्दनादेखि टीका प्रसाईंसम्म, आनन्द कार्कीदेखि सुरेश लामासम्म, रामकृष्ण ढकाल, राजेश पायल राई, यम बरालदेखि सुरजकुमार थापासम्मले मेरा सुपरहिट गीतहरू प्रस्तुत गर्नेछन् ।
कार्यक्रममा कति जना गायक–गायिकालाई उतार्दै हुनुहुन्छ ?
प्रेमध्वज प्रधान, दीपा नारायण झा, देविका बन्दना, आनन्द कार्की, यम बराल, राजेशपायल राई, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, कर्णदास, सुरज थापा, केञ्जल मेहर श्रेष्ठका साथमा म आफैं पनि गायकका रूपमा प्रस्तुत हुनेछु ।
यो कार्यक्रमको सांगीतिक पक्ष कस्तो रहने छ ?
झन्डै २० जना वाद्यवादकले प्रस्तुत गर्ने सांगीतिक धुनसहित ट्रयाक मिक्स समेत रहनेछ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा वाद्यवादनको नौलो सम्मिश्रण गराउने हाम्रो प्रयास रहने छ ।
टुँडिखेलपछि यो कार्यक्रमले कसरी निरन्तरता पाउला ?
हामी यही कार्यक्रम आईतबार सोल्टी होटलमा समेत प्रस्तुत गर्दैछौं, जहाँ बलिउडबाट आएका गायिकाहरू अनुराधा पौड्वाल तथा सञ्जिवनीले समेत सहभागिता जनाउने छन् । सोल्टीको कार्यक्रम रात्रि भोजसहितको हुनेछ, जहाँ ५ हजारको टिकट काट्नुपर्नेछ । टुँडिखेल तथा सोल्टी होटलपछि यो कार्यक्रमलाई देशव्यापी बनाउने विषयमा छलफल जारी छ ।
प्रकाशित :आश्विन १२, २०७५
टाइम्स स्क्वायरको उद्घाटनमा लाइभ कन्सर्ट